I-Romantic cottage kunye ne-sauna - I-Airbnb
I-Romantic cottage kunye ne-sauna
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMadara
Sinikezela ngendlu yethu ethandekayo yeendwendwe enesauna kunye nebhafu eshushu kwiindwendwe zaseHelsinki ezixabisa indalo, ubumfihlo kwaye mhlawumbi umjikelo wegalufa- sibekwe kanye kwindawo ye-12 eluhlaza yeKullo Golf kunye ne-40km ukusuka kwiziko le-Helsinki. I-cottage sisakhiwo esidala selog, ihlaziywe ngononophelo ukuze igcine umoya wayo ngelixa ihambelana neemfuno zomthandi wenduduzo.
-Ibhabhu eshushu (i-60e / ngosuku lokuqala, 30e / ngosuku olulandelayo)
Isakhiwo, esisusela kunyaka we-1948, yindlu yelog yaseFinland. Inokufudumala kombane (kuquka ukufudumeza umgangatho kwipaseji kunye neeshawa) kunye nendawo yomlilo eya kwenza ukuba uhlale ukhululekile ngexesha leentsuku ezibandayo zasebusika.
Ikhitshi ifanelekile ukupheka okulula. Ifakwe ifriji kunye nesikhenkcezisi esincinci, i-oven microwave (akukho oveni eqhelekileyo), i-1 induction hot plate, ibhoyila yamanzi, itoaster kunye nomatshini wekofu. Uya kufumana izitya, izixhobo zokupheka ezisisiseko, izinongo, ikofu kunye neti. Uya kuba ne-BBQ yamalahle kumgangatho wakho (zisa namalahle!)
4.96 · Izimvo eziyi-284
Le ndlu ikwikona yelali encinci neyozeleyo yasemaphandleni, ibekwe phakathi kwebala legalufa nolwandle. Indlu encinci ikufuphi neHelsinki kunye nePorvoo, eqhagamshelwe kakuhle kwiindlela ezinkulu.
Indawo yokutyela yeklabhu yelizwe ikufuphi, inika isidlo sasemini esimnandi yonke imihla yomsebenzi. Kukwakho nepizzeria yasekhaya ehambisa ekhaya kunye ne-BBQ yicawe endala. Ngaphandle koko, iindawo zokutyela ezikufutshane, iivenkile kunye neenkonzo zisePorvoo.
Uhola wendlela iHelsinki-Porvoo yi-3km ukusuka kwindlwana.
Isikhululo seenqwelomoya saseHelsinki-Vantaa sisiqingatha seyure ngemoto.
Izibuko laseKilpilahti kunye nendawo yoshishino ibekwe ziikhilomitha ezimbalwa ezantsi kweetshimini eziselunxwemeni zinokubonwa kwiyadi yethu ngemini epholileyo, kwaye umoya wasezantsi uthwala izandi ezintyilozayo.
I-cottage ihleli emahlathini, kodwa ayisiyiyo nayiphi na indawo 'ngaphandle kwegridi'.
Umbuki zindwendwe ngu- Madara
Asihlali kwipropathi, kodwa unokuhlala usifumana ngefowuni ukuba ufuna naluphi na uncedo ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Porvoo